Ha Na-enye Ndị Ọzọ Ihe Ha Nwetara na jw.org
Ịntanet adịbeghị ebe niile na Kuba, ma ndị chọrọ ịga n’Ịntanet nwere ike ịga n’ebe dị iche iche ụlọ ọrụ telifon mepere ma si na ha banye n’Ịntanet. Ma, ọ na-adị ezigbo oké ọnụ. Ọ bụ ya mere alaka ụlọ ọrụ anyị ji gbaa ọgbakọ dị iche iche ume ka ha mee ndokwa ka otu onye nkwusa na-aga na jw.org enweta akwụkwọ anyị na ihe ndị a na-egere egere nakwa vidio. Ya lọta, ya ekesaara ndị nkwusa ndị ọzọ ha na ya nọ n’ọgbakọ ihe ndị o nwetara. Ọ bụ ihe a ka ụmụnna anyị na-eme. Ọ na-enyekwara ha ezigbo aka.
Ụlọ Nzukọ Alaeze Dị Ha Mkpa Karịa Ekwentị
E nwere nwata nwaanyị dị afọ iri aha ya bụ Teona na nwanne ya nwaanyị dị afọ asatọ aha ya bụ Tamuna. Ha bi ná mba Jọjia. Ha abụọ chọrọ inweta ekwentị. N’ihi ya, nne papa ha kwere ha nkwa na ya ga na-esi n’ụgwọ ezumike nká ya na-enye ha ego kwa ọnwa ruo mgbe ha ga-enweta ego ga-ezuru ha ịzụta ekwentị. Ma, ọ dị mwute na nne papa ha a nwụrụ na mberede. Mgbe ihe a mere, ndị ezinụlọ ha nyere ụmụaka a ụgwọ ezumike nká ikpeazụ a kwụrụ nne papa ha ka ha nwee ike ịzụta ekwentị ha chọrọ. Ma mgbe ụmụaka ahụ chebaara ihe ha kwesịrị iji ego ahụ mee echiche, ha degaara ọgbakọ ha akwụkwọ, sị: “Anyị ma na n’izu abụọ na-abịanụ, a ga-amalite ịrụrụ anyị Ụlọ Nzukọ Alaeze ọhụrụ n’obodo anyị a bụ́ Tejola. N’eziokwu, nne anyị ochie chọrọ inye aka ka a rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze a. Ebe ọ bu na ọ nwụọla, anyị ekpebiela ka anyị nye ọgbakọ ụgwọ ezumike nká ikpeazụ a kwụrụ ya kama iji ya zụọ ekwentị. Biko, rụọrọnụ anyị Ụlọ Nzukọ Alaeze mara mma!”
E Wepụtara Akwụkwọ Nsọ Grik n’Asụsụ Tetum
Na Jenụwarị 17, 2014, Nwanna Geoffrey Jackson, onye so n’Òtù Na-achị Isi, wepụtara Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst n’asụsụ Tetum. Ọ nọ n’obodo a na-akpọ Dili, nke dị na Timọ-Lest, wepụta ya. Tetum bụ asụsụ ndị mmadụ kacha asụ ná mba ahụ. Tupu ya ewepụta Baịbụl a, Akwụkwọ Nsọ Grik e nwere n’asụsụ Tetum bụ naanị nke Chọọchị Katọlik bipụtara. Ma, ha jụrụ iresi ya Ndịàmà Jehova ma ọ bụ onye ọ bụla ha chere na ya na Ndịàmà Jehova na-amụ ihe. Baịbụl a Chọọchị Katọlik sụgharịrị nwere ọtụtụ ihe e dejọrọ na ya, nwekwa ọtụtụ ihe e wepụrụ na ya. Ihe ọzọ bụ na ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịghọta okwu ndị e dere na ya. Ma Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ a e wepụtara adịghị otú ahụ. Ọ bụ ya mere Nwanna Darren, bụ́ onye si mba ọzọ bịa ikwusa ozi ọma na Timọ-Lest, ji kwuo, sị: “Ọtụtụ ndị Timọ-Lest gụrụ Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ a na-enwe obi ụtọ n’ihi na e nweghị ihe e dejọrọ na ya. Ha na-asịkwa ka e wetara ha nke ha ozugbo. Ọ na-adịrị ha mfe ọgụgụ, obi dịkwa ha ụtọ na mkpụrụ akwụkwọ e ji dee ya gbara okpotokpo n’ihi na ọtụtụ n’ime ha enweghị ezigbo ọkụ n’ụlọ ha. Ọtụtụ ndị e nyere Baịbụl a jizi ya na-amụ ihe ugbu a.”
‘Jehova Emeela Ka M Nwetawa Akwụkwọ Anyị n’Asụsụ M’
Masedonia: Ebe ụmụnna anyị ji akwụkwọ ndị e bipụtara n’asụsụ Romani na-ekwusa ozi ọma
N’ọnwa Jenụwarị afọ 2014, e nwere nnukwu ihe mere ná mbọ nzukọ Jehova na-agba ka a sụgharịa akwụkwọ anyị n’asụsụ Romani, bụ́ asụsụ a na-asụ ná mba Masedonia. Ọ bụ n’ọnwa ahụ ka a họpụtara ìgwè ndị nsụgharị ọrụ ha ga-abụzi ịsụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ a. E nyekwara ha ikike ka ha jiri ma mkpụrụ akwụkwọ A B Ch ma mkpụrụ akwụkwọ Sirilik na-asụgharị akwụkwọ anyị n’asụsụ a (mkpụrụ akwụkwọ Sirilik yitewere mkpụrụ akwụkwọ Grik). Nke a ga-abara ndị na-asụ asụsụ Romani ezigbo uru n’ihi na ịgụ ihe ná mkpụrụ akwụkwọ Sirilik amarala ọtụtụ n’ime ha ahụ́. Ọ bụ mkpụrụ akwụkwọ a ka gọọmenti mba Masedonia kwadoro ka e jiri na-ede asụsụ a.
Obi na-atọ ọtụtụ ndị na-asụ asụsụ Romani ezigbo ụtọ na nzukọ Jehova na-ebipụta akwụkwọ anyị n’asụsụ a. Otu nwanna nwaanyị sịrị: “Achọpụtara m na ọtụtụ ndị si n’agbụrụ ọzọ na-eledakarị m anya maka na ọ bụ naanị asụsụ Romani ka m na-asụ. N’ihi ya, m na-ekele Jehova maka otú o si mee ka m nwetawa akwụkwọ anyị n’asụsụ m. Nke a emeela ka mụ na Chineke dịrịkwuo ná mma.”
“M na-ekele Jehova maka otú o si mee ka m nwetawa akwụkwọ anyị n’asụsụ m”
Alaka Ụlọ Ọrụ Dị n’Amerịka Na-elekọtazi Ha
Na Febụwarị 1, 2014, alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka malitere ilekọta ọgbakọ ndị dị na Jamaịka nakwa n’Agwaetiti Keman na ebe niile ha na-ekwusa ozi ọma. N’ihi ya, e nweziri ihe karịrị otu nde ndị nkwusa na narị puku ndị nkwusa abụọ n’ebe dị iche iche alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka na-elekọta. Ebe ndị ahụ bụ steeti iri ise dị n’Amerịka, Bahamas, Bamuda, Puweto Riko, Agwaetiti Vejin nke Amerịka, Agwaetiti Vejin nke Briten, nakwa Agwaetiti Tọks na Kaịkos.
Ndị Ọsụ Ụzọ E Nwere na Japan
Na Japan, ọnụ ọgụgụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwaanyị ndị na-arụ ọrụ ọsụ ụzọ ka na-arị elu. Nke a emeela ka mba a bụrụ mba nke anọ a kacha nwee ndị ọsụ ụzọ oge niile n’ụwa niile. Ná mbido afọ ije ozi nke 2014, puku ụmụnna abụọ na narị isii na iri anọ na isii bidoro ọrụ ọsụ ụzọ oge niile. Nke a mere ka ndị na-arụ ọrụ ọsụ ụzọ na Japan ruo iri puku mmadụ isii na ise, narị isii na iri isii na asatọ. E kee ndị nkwusa niile e nwere ná mba a ụzọ abụọ, ihe karịrị otu ụzọ rụrụ ọrụ ịsụ ụzọ oge niile ma ọ bụ nke inyeaka n’ọnwa Mach afọ 2014.
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2015